Bishop & Secretary
Cardinal Auxilliary Bishop Secretary Bishops
Vatican Vatican News NISCORT FABC UCA News CBCM NCMS Yangon Archdiocese Pathein Diocese Mawlamying Diocese Pyay Diocese Mandalay Archdiocese Hakha Diocese Lashio Diocese Bamaw Diocese Kalay Diocese Myitkyina Diocese Taungyi Archdiocese Phakon Diocese Loikaw Diocese Taungngu Diocese Kengtung Diocese
Fr. Tony ၏ ဈာပန မစ္ဆားတရားတော်မြတ်၌ ဆရာတော်ကြီး ဂျွန်စောယောဟန် သြဝါဒ
Funeral Mass for Rev. Fr. Tony was celebrated by Bp. Yaw Han at. St. Mary's Cathedral. About 6o priests and hundreds of Catholics attended and prayed for the repose of his soul.
Fr. Tony ၏ ဈာပန မစ္ဆားတရားတော်မြတ်၌
ဟောကြားသော ဆရာတော်ကြီးဂျွန်စောယောဟန်၏ သြဝါဒ
လူတစ်ယောက်က အမေ့ဝမ်းခေါင်းထဲကနေ မွေးဖွားတဲ့အချိန်ကစပြီး၊ ဒီကလေးဟာ ဆင်းရဲမလား၊ ချမ်းသာမလာ၊ စာတော်မလာ၊ လူကောင်းဖြစ်မလာ၊ ဆိုတာတွေဟာ ဘာမှမှန်းဆတွက်ချက်လို့မရဘူး။ ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုမျိုးသေမလဲဆိုတာလဲ ကြိုပြောလို့မရဘူး။
----ဒါပေမယ့် လူတစ်ယောက်ဟာ မွေးတဲ့နေ့မှာပဲ သေချာပြောနိုင်တာကတော့၊ ဒီလူဟာ တစ်နေ့နေ့တော့ သေမှာ ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
-- ဘာဖြစ်လို့ မိမိသေရမယ့်အချိန်ကို ဘုရားက ကျွန်ုပ်တို့ကို မသိစေတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတော့ ရဟန္တာသြဂုတ်စတင်းက၊ ဘုရားသခင်က မင်းကို ဘယ်နေ့သေမလဲဆိုတာ ကြိုတင်သိစေရင်၊ မသေခင်မှာ ဆင်ကန်းတောတိုး၊ ထင်ရာဆိုင်းပြီး အပြစ်တွေလုပ်ပြီးမှ သေခါနီးကျမှ နောင်တယူတာမျိုးကို မင်းကို မလုပ်စေချင်ဘူး။ ဒါကြောင့် နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာ မိမိက ကုသိုလ်ပါရမီလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကောင်းကောင်း မွန်မွန်နေထိုင်တာကို ဘုရားက လိုချင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီး ရှင်းပြပါတယ်။
Whether we are alive or dead we belong to the Lord! Amen
Religions for Peace, 10th World Assembly
Law Ka Thar Ra လေကသာရ Award steering committe at the Archbishop's house
Chinese New Year mass at. St. Theresa's Church,
St. Ann Church-feast Mass in Alwan Swout village
Today at archbishop's house
သန်လျင်ရှိပေါ်တူဂီဘုရားကျောင်းမြေသန့် မင်္ဂလာ မစ္ဆားတရားတော်မြတ်ပူဇော်ခြင်းအခမ်းအနား
Church feast of Epiphany was celebrated by Cardinal Charles Bo
Independence-Day-Wishes to Amay Su
Cardinal Charles Bo visited SHE Education center in Bago
The Solemnity of Mary, Mother of God and laying of Ye-Mon Church foundation was officiated by Cardinal Charles Bo
New Year Mid-night Mass at the home for the aged
Final Profession of 10 Servite Sisters